Umthengisi wezingubo zokugqoka, ngokushesha imfashini nokukhishwa | I-stockmarca
Iqoqo ongafuni ukuliphuthelwa Imininingwane engaphezulu!
Setha i-e-commerce yakho
Ngendlela elula kakhulu ungasetha i-e-commerce yakho bese wenza ukwehla. Faka ikhathalogi yethu ngemikhiqizo engaphezu kuka-700 esitokweni bese ujoyina umhlaba oku-inthanethi.
Unaso isitolo esiku-inthanethi?
Uma ungenayo iwebhusayithi sizokunikeza eyodwa, ngendlela oyithandayo. Ngesizinda nama-logo owakhethayo. Futhi uma usunayo, ungakhathazeki, sinakekela ukufaka ithuluzi lethu lokungenisa ikhathalogi ukuze uqale ukuthengisa ngokushesha.
Ngensizakalo yethu yeDropshipping uzoba nezinkomba eziningi zokuthola impumelelo ngesitolo sakho esiku-inthanethi. Ngeke kudingeke ukhathazeke nganoma yini enye ngaphandle kokuthengisa ngoba izimpahla zenziwe yithi.
Sizokunikeza ukufinyelela kokuqukethwe ukuze ukwazi ukukhangisa kumanethiwekhi wakho wokuxhumana nomphakathi. Sicabanga ukuthi kubalulekile ukukhangisa ku-Instagram nakuFacebook futhi ngalokhu, sizokunika isandla.
Izinkulungwane zemikhiqizo esitokweni ngokuthunyelwa ngokushesha
Siphatha iStock sakho
Ingabe ungumsabalalisi wemikhiqizo ehola phambili yemfashini, izesekeli nezicathulo? Siphatha isitoko bese siyathengisela sona. Sinokuhlangenwe nakho nephothifoliyo ebanzi yamakhasimende esingathumela kuwo isitoko sakho futhi sisithengise ngaphandle kokukhathazeka nganoma yini.
Yini okusha ngamaqoqo
Sikunikeza imfashini eningi enziwe ngezifiso ngentengo enhle kakhulu. Imikhiqizo emihle kakhulu yokuthumela ngokushesha okukhona nokusungula ezitolo zethu. Sivumelanisa nezidingo zakho nesabelomali.
Bona inkatho etholakalayo
Sihambisana nawe kuzo zonke izinyathelo zokukunikeza izinsiza ezinhle kakhulu nezeluleko ezidingekayo zokwenza i-adventure yakho emhlabeni wefashini ube yimpumelelo.
Vula isitolo sakho sezingubo ezingokomzimba kanye online
Gcwalisa isitolo sakho ngemikhiqizo yamanje nefunwa kakhulu. Futhi uma uyidinga, sakha iwebhusayithi yakho ukuze ukwazi futhi ukuthengisa online.
Ukulahla bese ukhohlwa nge-stock
Ngensizakalo yethu eyehliswayo uzoba nezinkulungwane zezethenjwa zokufeza impumelelo ngesitolo sakho esiku-inthanethi. Ukuxhuma ikhathalogi yethu kuwebhusayithi yakho nokunakekela ukuthunyelwa. Yini ongenayo iwebhusayithi? Sikwenzela yona futhi sifundisa ukukusebenzisa.
Ikhathalogi eku-inthanethi ivuselelwa njalo
Sivuselela isitoko sethu sithola imikhiqizo emisha nsuku zonke ngezinkomba ezingaphezu kuka-30.000 ekuvuseleleni njalo. Ukubonisana ukuze unikeze amakhasimende akho ukuthi imakethe ifunani kakhulu.
Isevisi yamakhasimende eqeqeshwe kakhulu emkhakheni oseSpain. Ngokuvumela kweminyaka engaphezu kwengu-30 yesipiliyoni namakhasimende angaphezu kuka-2000 kulo lonke elaseYurophu.
Ingabe ungumsabalalisi wemikhiqizo ehamba phambili? Siphatha isitoko bese siyathengisela sona. Ngaphandle kokuthi ukhathazeke nganoma yini, sisebenza njengabaxhumanisi phakathi kwakho nekhasimende lokugcina. Besiphethe isitoko sabasabalalisi bethu iminyaka engaphezu kwengu-30 ngomphumela omuhle wokuthengisa.
Sikusiza ngaso sonke isikhathi ukuthi usebenzise wonke amashaneli wokusabalalisa aphumelela kakhulu. Ukuthengisa kokubili esitolo somzimba nesiteshi se-inthanethi, ngesitoko sakho uqobo noma ngensizakalo yethu eyehla.
OKUBALULEKILE: Asithengisi izingubo ezingamasekeni noma isisindo, futhi asithengisi ifenisha yezentengiselwano.
Vula isitolo sakho sezingubo zomzimba
Sinikeza wonke umkhiqizo wesitolo sakho ngokugcwaliswa kabusha okuqhubekayo, sabelana ngakho konke okuhlangenwe nakho kwethu. Ayikho i-franchise, ayikho imali ekhokhwayo, ayikho imali, ayikho kuphela. NgeStockmarca uzoba nenkululeko nokulawula okuphelele kwebhizinisi lakho ukulikhulisa ngendlela othanda ngayo.
Ngifuna ukwazi okuningi
Ngabe bewazi ngale nsizakalo?
#I #Dropshipping iyindlela yokuthumela nokudiliva
➡QAPHELA AMAKHANDLELO WETHU OKUPHELA⬅ https: //
I-📌CROCS Lot https://stockmarca.com/portfolio-i
Lo mlayezo wephutha ubonakala kuphela kubaphathi be-WordPress
Kube nenkinga ngokuphakelayo kwakho kwe-Instagram.